"လူငယ်တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လမ်းပျောက်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့ အခါ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်"
ဘယျအသကျအရှယျပိုငျးမှာ မဆို feeling lost ဆိုတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ပြောကျဆုံးတဲ့ ခံစားမှုမြိုးခံစားဖူးကွမှာပါ။
ခတျေစကားနဲ့ပွောရမယျဆိုရငျတော့ လမျးပြောကျတာ ပေါ့။ ဘာလုပျ ရမှနျးမသိဖွဈတာ။ လူငယျတှမှော အဖွဈမြားပါတယျ။
ဥပမာ အခုမှ ကြောငျးပီးခါစ လူငယျတှဆေို အလုပျပဲ လုပျရမလား၊ သငျတနျးတှပေဲ ဆကျတကျလိုကျရမလား၊ အလုပျလုပျလိုကျရငျလညျး ကိုယျနဲ့ မကိုကျညီမှာ စိုးနတေယျ။ ငါဘယျလို ရှဆေ့ကျရမလဲ၊ တှဝေနေတေဲ့ အခြိနျ ၊ ဘယျအလုပျကို အသကျမှေးဝမျးကွောငျးအလုပျ တဈခုဖွဈ ရှေးခယျြရမလဲ အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။ ရှေးခယျြစရာတှမြေားလာရငျလညျး လမျးပြောကျတတျပါတယျ။
Carrier လမျးကွောငျးမှ မဟုတျပါဘူး.. အခဈြရေး၊ မိသားစုရေး၊ လူမှုရေးတှမှောလညျး အကွောငျးအမြိုးအမြိုးကွောငျ့ လမျးပြောကျတတျကပြါတယျ။ တကယျလို့သငျဟာ လမျးပြောကျနသေူတဈယောကျဖွဈရငျလဲ စိတျမပူပါနဲ့ သငျတယောကျတညျးမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောလဲ ခံစာဖူးပါတယျ။ လူတိုငျးလူတိုငျလဲ ခံစားဖူးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလို ကိုယျ့ကိုယျကို ပြောကျဆုံးနတေဲ့ အခြိနျ၊ တှဝေနေတေဲ့ နရော မှာ ပဲ အခြိနျအကွားကွီးကုနျသှားလို့မဖွဈပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျကိုယျကို ပြောကျဆုံးနတေဲ့ အခါ ဘယျလိုအရာတှလေုပျဆာငျသငျ့လဲဆိုတာကတော့ .....................
ကိုယျ့ရဲ့ သူငယျခငျြးပဲ ဖွဈဖွဈ၊ မိသားစု ကိုပဲ ဖွဈဖွဈတိုငျပငျပါ။ အကွံကောငျးတှပေေးနိုငျမယျ့သူတှကေို ကိုယျ့ အခွနေကေိုပွောပွပါ။ ကိုယျ့မှာဖွဈနတေဲ့ အခကျအခဲကိုပွောပွပါ။ သူတို့ဆီက အကွံဉာဏျတောငျးပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုပြောကျဆုံး နပွေီဆိုတညျးက ကိုယျ့ကိုယျကို နားမလညျ၊ မသိနိုငျလို့ပါပဲ။ တခွားသူက ကိုယျ့အပျေါကွညျ့တဲ့ အခါ ကိုယျ့ကိုယျကို မွငျနတေဲ့ အမွငျနဲ့ ကှဲပွားသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ပောကျြဆုံးနတေယျလို့ ခံစားရတဲ့ အခါ တိုငျပငျပါ။
(၂) Social Media တှမေသုံးပါနဲ့
အထူးသဖွငျ့ ကတော့ facebook ပေါ့၊ facebook သုံး တဲ့ သူတျောတျော မြားမြား က ကိုယျအဆငျပွနေတော တှပေဲ တငျကွတာ မြားပါတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို အားမရဖွဈနပေါတယျဆိုမှ သူမြားတှေ သှားတာ၊ လာတာ၊ ပြျောနတော တှကေိုကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို အားမရပိုဖွဈစပေါတယျ။ အဲ့ထကျစိုးရငျ စိတျဓာတျကတြာတှထေိပါဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Social Media တှေ သုံးခွငျးကို အတကျနိုငျဆုံးရှောကျကဉျြပါ။
(၃) Volunteer လုပျပါ
ကိုယျ့ ကိုယျကို ပြောကျဆုံးနတေဲ့ အခြိနျမှာ သူမြားတှကေို ကူညီလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျလညျတှရှေိ့နိုငျပါတယျ။ နောကျတဈခုက Volunteer တကျတကျကွှကွှလုပျနတေဲ့ သူတှဆေီကနေ အငျအားတှေ၊ အကွံဉာဏျတှလညျးရနိုငျပါတယျ။ Volunteer လုပျပါ .. Volunteer လုပျခွငျးအားဖွငျ့ ကိုယျကွိုကျတဲ့ အရာတဈခုကို ပွနျလညျရှာဖှတှေရှေိ့နိုငျပါလိမျ့မယျ။
(၄) သေးသေးလေးတှကေ စလုပျပါ
ကိစ်စသေး သေးသေး လေးတှေ စလုပျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို အရှိနျမွှငျ့တငျပါ။ ဥပမာ - အပျေါမှာပွောခဲ့ သလို ကိုယျကိုယျကို လမျးပြောကျနတေယျလို့ခံစားရတဲ့ အခါ..ကိုယျ့ကိုအငျအားဖွဈစမေယျ့၊ စာအုပျဖတျတာတို့၊ ကိုယျကွိုကျတဲ့ Volunteer သှားလုပျတာတို့၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာတို့ အစရှတဲ့ ကိစ်စသေးသေးလေးတှကေို အရငျလုပျပါ။ ကိစ်စသေးသေးလေးတှေ လုပျရငျ ကိုယျ့ကိုယျကို ပြောကျဆုံးနတေယျလို့ခံစား နရောကနေ လမျးကွောငျးပွနျတညျ့လာပါလိမျ့မယျ။
အထူးသဖွငျ့ ကိုယျထှကျ ဖူးနကွေ ခရီးမဟုတျတာကို သှားပါ၊၊ ဥပမာ.. တောငျတကျခရီးလိုမြိုးပေါ့။ ကိုယျလုပျနကေအြရာတှကေနေ ခှဲထှကျပွီး အသဈအသဈတှကေိုခံစားခွငျးအားဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြအလငျးရောငျကိုပွနျလညျတှရှေိ့နိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သငျ့ကိုယျသငျ ပြောကျဆုံးနတေယျလို့ ခံစားရနရေငျ အပျေါမှာပွောပွပေးတဲ့ အခကျြတှကေို အခုခြိနျစလုပျပွီး တော့ ကိုယျ့ဘဝရဲ့ ရညျမှနျးခကျြ အစဈအမှနျတှကေို တှရှေိ့ကွပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး ….
ဘယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းမှာ မဆို feeling lost ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးတဲ့ ခံစားမှုမျိုးခံစားဖူးကြမှာပါ။ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လမ်းပျောက်တာ ပေါ့။ ဘာလုပ် ရမှန်းမသိဖြစ်တာ။ လူငယ်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဥပမာ အခုမှ ကျောင်းပီးခါစ လူငယ်တွေဆို အလုပ်ပဲ လုပ်ရမလား၊ သင်တန်းတွေပဲ ဆက်တက်လိုက်ရမလား၊ အလုပ်လုပ်လိုက်ရင်လည်း ကိုယ်နဲ့မကိုက်ညီမှာ စိုးနေတယ်။ ငါဘယ်လို ရှေ့ဆက်ရမလဲ၊ တွေဝေနေတဲ့ အချိန် ၊ ဘယ်အလုပ်ကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ် တစ်ခုဖြစ် ရွေးချယ်ရမလဲ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ရွေးချယ်စရာတွေများလာရင်လည်း လမ်းပျောက်တတ်ပါတယ်။
Carrier လမ်းကြောင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး.. အချစ်ရေး၊ မိသားစုရေး၊ လူမှုရေးတွေမှာလည်း အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် လမ်းပျောက်တတ်ကျပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ လမ်းပျောက်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်လဲ စိတ်မပူပါနဲ့ သင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လဲ ခံစာဖူးပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်လဲ ခံစားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အချိန်၊ တွေဝေနေတဲ့ နေရာ မှာ ပဲ အချိန်အကြားကြီးကုန်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အခါ ဘယ်လိုအရာတွေလုပ်ဆာင်သင့်လဲဆိုတာကတော့ .....................
ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစု ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်တိုင်ပင်ပါ။ အကြံကောင်းတွေပေးနိုင်မယ့်သူတွေကို ကိုယ့် အခြေနေကိုပြောပြပါ။ ကိုယ့်မှာဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲကိုပြောပြပါ။ သူတို့ဆီက အကြံဥာဏ်တောင်းပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျောက်ဆုံး နေပြီဆိုတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားမလည်၊ မသိနိုင်လို့ပါပဲ။ တခြားသူက ကိုယ့်အပေါ်ကြည့်တဲ့ အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်နေတဲ့ အမြင်နဲ့ ကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ခံစားရတဲ့ အခါ တိုင်ပင်ပါ။
(၂) Social Media တွေမသုံးပါနဲ့
အထူးသဖြင့် ကတော့ facebook ပေါ့၊ facebook သုံး တဲ့ သူတော်တော် များများ က ကိုယ်အဆင်ပြေနေတာ တွေပဲ တင်ကြတာ များပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှ သူများတွေ သွားတာ၊ လာတာ၊ ပျော်နေတာ တွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရပိုဖြစ်စေပါတယ်။ အဲ့ထက်စိုးရင် စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေထိပါဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Social Media တွေ သုံးခြင်းကို အတက်နိုင်ဆုံးရှောက်ကျဉ်ပါ။
(၃) Volunteer လုပ်ပါ
ကိုယ့် ကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အချိန်မှာ သူများတွေကို ကူညီလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Volunteer တက်တက်ကြွကြွလုပ်နေတဲ့ သူတွေဆီကနေ အင်အားတွေ၊ အကြံဥာဏ်တွလည်းရနိုင်ပါတယ်။ Volunteer လုပ်ပါ .. Volunteer လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၄) သေးသေးလေးတွေက စလုပ်ပါ
ကိစ္စသေး သေးသေး လေးတွေ စလုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှိန်မြှင့်တင်ပါ။ ဥပမာ - အပေါ်မှာပြောခဲ့ သလို ကိုယ်ကိုယ်ကို လမ်းပျောက်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့ အခါ..ကိုယ့်ကိုအင်အားဖြစ်စေမယ့်၊ စာအုပ်ဖတ်တာတို့၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Volunteer သွားလုပ်တာတို့ ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတို့ အစရှတဲ့ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကို အရင်လုပ်ပါ။ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေ လုပ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ခံစား နေရာကနေ လမ်းကြောင်းပြန်တည့်လာပါလိမ့်မယ်။
အထူးသဖြင့် ကိုယ်ထွက် ဖူးနေကြ ခရီးမဟုတ်တာကို သွားပါ၊၊ ဥပမာ.. တောင်တက်ခရီးလိုမျိုးပေါ့။ ကိုယ်လုပ်နေကျအရာတွေကနေ ခွဲထွက်ပြီး အသစ်အသစ်တွေကိုခံစားခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်အလင်းရောင်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ခံစားရနေရင် အပေါ်မှာပြောပြပေးတဲ့ အချက်တွေကို အခုချိန်စလုပ်ပြီး တော့ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ရည်မှန်းချက် အစစ်အမှန်တွေကို တွေ့ရှိကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ….
Ref : https://www.youtube.com/watch?v=y7y2e0nZGSY
feeling lost yourself